‘मार्क्सको झट्केलो छोराको कहानीदेखि महराको यौन प्रकरणसम्म’
राजेन्द्र अधिकारी काठमाडाैं, ४ कात्तिक
गत हप्ता आइतबार साँझको घटना भनेर मिडियामार्फत एक जना संसद् सचिवालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारी रोशनी शाहीले सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट आफू बलात्कृत भएको सार्वजनिक गरिन् । सोमबारदेखि यो विषयले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, चिया पसल र चोकचोकमा समेत निकै चर्चा पायो । दिनहरू बित्दै जाँदा पीडित भनिएकी महिलाको फेरिएको बयान मिडियामार्फत नै सार्वजनिक भयो ।
पछिल्लो बयानमा ‘आफूले रिसको झाेंकमा बोलेका कुराहरू झुटा हुन्, म महरा सरबाट बलात्कृत भएको होइन’ भन्ने आयो । महराले पनि छानबिनलाई सहज होस् भनेर सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । बिहीबार रोशनीले प्रहरीसमक्ष महराबाट आफूमाथि कुनै दुव्र्यवहार नभएको भन्ने व्यहोराको निवेदन दर्ता गराएको कुरा मिडियामा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियाहरूमा यो विषयमा थुप्रै टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।
यौन प्रकरणकै कारणले विवादमा परेका चर्चित व्यक्तिहरूका थुप्रै कहानीहरू सुन्न र पढ्न पाइन्छन् । कम्युनिस्टहरूका गुरु मानिएका कार्ल मार्क्सको जीवनी नै यो विषयमा विवादास्पद छ । कार्ल मार्क्स र उनकी श्रीमती जेनी लण्डन बस्दा उनीहरूको सहयोगीको रूपमा घरमा काम गर्न राखिएको ‘हेलेन डेमुथ’ नाम गरेकी महिला सन् १८४५ देखि सँगै रहिन् । एक पटक जेनी विदेश भ्रमणमा रहेको मौकामा मार्क्स र ती कामदार महिलाबीच सम्बन्ध कायम भएछ र सन् १९५१ मा ती महिलाबाट छोरा जन्मिएछ । मार्क्सका नजिकका साथी फ्रेडरिक एङ्गेल्स पनि मार्क्ससँगै बस्ने, आऊजाऊ गर्ने गर्थे ।
उनले मार्क्स र जेनीको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने जोखिम देखेर त्यो बच्चा मार्क्सको तर्फबाट नभई आफ्नो कारणले भएको भने र बच्चाको नाम पनि हेनरी फ्रेडरिक डेमुथ राखियो । सन् १८८३ मा मार्क्सको मृत्यु भएपछि त्यसको केही वर्षमा जेनीको पनि मृत्यु भयो । त्यतिबेला मार्क्सको छोरीसित एङ्गेल्सले ती कामदार महिलाबाट जन्मेको बच्चाबारेको रहस्य बताए । यो विषयमा प्रदिप गिरीको लामो लेख पत्रिकामा पनि छापिएको थियो । ‘मार्क्सको झट्केलो छोरो’ को विषय लामो समय विवादास्पद देखियो, अझै पनि भरपर्दो आधारहरू छैनन् भनिन्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अर्का ठूला नेता माओत्सेतुङले त चारवटी श्रीमती बिहे गरे र थुप्रै युवतीहरू रखौटी बनाएका थिए भनिन्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा बहुलाहा राजा रणबहादुर शाह ‘स्त्री लम्पट’ थिए भनेर पढ्न पाइन्छ तर अन्य राजाहरूको यौन लीला र कर्तुतहरू बाहिर जनस्तरसम्म आएनन्, लेख्नेहरूले आँट गरेनन्, भन्नेहरू धेरै छन् । दरबारमा काम गर्न वा यौन पूर्तिका लागि लगिएका युवतीहरू कति बाँचे, कति गायब पारिए, त्यसको लेखाजोखा छैन, अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । ‘नमिता–सुनिता काण्ड’ रहस्यमै रह्यो तर आशंका दरबारकै शक्तिशाली मान्छेहरूबाट भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा थुप्रै लेखहरूबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूका पनि थुप्रै यौन प्रकरणहरू बाहिर आए । कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहको ‘जलजला’ भन्ने कार्यकर्तासितको यौन प्रकरण रहस्यमयी रह्यो, ती कार्यकर्ता मारिइन् भन्ने दाबी पनि छ कतिपय कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको । त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता रामबहादुर थापा (अहिलेका गृहमन्त्री) र महिला नेतृ पम्फा भुसालबीचको यौन प्रकरणले त माओवादीभित्र ठूलै रूप लिएको थियो र पार्टीले दुवैलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो ।
माओवादीबाट निष्कासनमा परेका अर्का नेता रवीन्द्र श्रेष्ठ नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपश्चात् पोलिट ब्यूरो सदस्य भए र पछि सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत भए । मन्त्री पद खुस्केको केही दिनपश्चात् उनले १८ वर्षे युवती लिएर फरार भए भन्ने समाचार आयो, त्यसपछि उनी गुमनाम नै छन् । २०५२ सालतिर एमालेभित्र ‘सुरा सुन्दरी काण्ड’ निकै चर्चित रह्यो । वामदेव गौतमलगायतका नेताहरू होटलमा ‘ब्लू फिल्म’ र सुन्दरीहरूसित रमाएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए ।
एमालेका तर्फबाट कृषिमन्त्री भएका हरिप्रसाद पराजुलीले उत्ताउलोपन देखाएकै कारण मन्त्री पद गुमाएका थिए । अहिले प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईमाथि पनि यौन शोषणको आरोप लगाउँदै एउटी महिला मिडियामा आएकी छिन् । यी सबै शृङ्खलाहरू हेर्दा कम्युनिस्ट राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका थुप्रै नेताहरूको यौन जीवन उचित ढंगले व्यवस्थापन हुन नसकेको र विवादमा परेको पाइन्छ । पछिल्लो संस्करण कृष्णबहादुर महरामा आइपुग्दा नेकपाले ठूलै राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने कांग्रेसभित्रको कहानी पनि कम रोचक छैन । बीपी कोइराला सिंग्मण्ड फ्रायडको यौन मनोविज्ञानबाट प्रभावित थिए भनिन्छ । उनका लेख, रचनाहरूमा त्यो झल्किन्छ । साथै बीपीसित नजिकबाट संगत गरेका मान्छेहरूको भनाइअनुसार बीपी यौनको मामिलामा निकै उदार थिए । यतिसम्म कि हाम्रो संस्कारले वर्जित गरेका पारिवारिक/आफन्तहरूबीचका यौन सम्बन्धहरूलाई पनि सामान्य रूपमा लिने गर्थे । जेलमा भएको नेताको श्रीमतीसित पल्केको कार्यकर्ताप्रति पनि उदार रहनुपर्छ भन्ने आशय उनको उपन्यासमा पढ्न पाइन्छ ।
नेताको सहयोगीको रूपमा रहेको कार्यकर्ता जेलमा आफ्नो नेतालाई खाना, औषधि पुर्‍याउन पुगेको हुन्छ भने घरमा तिनै नेताकी श्रीमतीलाई पनि भेट्ने, सहयोग गर्ने काम गरेको हुन्छ । यसबीचमा कार्यकर्ताका कारण नेताकी श्रीमतीबाट बच्चा जन्मन्छ । सामाजिक जटिलताको व्यवस्थापनको कारण तनाव भए पनि उक्त कार्यकर्ता र नेताकी श्रीमतीबीचको यौन सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने आशय देखिन्छ बीपीको उपन्यासमा । अर्का रमाइला कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किशुनजी), ढुण्डीराज शास्त्रीहरू यौनका बारेमा निकै खुला थिए भन्छन् संगत गरेका कांग्रेसीहरू ।
किशुनजीले बिहे गरेनन् तर अन्तर्वार्तामै गाई नपालीकन, गोबर नसोहोरीकन दूध खान पाइएकै छ किन झन्झट गर्ने ? भनेर ठट्टा गरे पत्रकारसित भनेर हल्ला चलेको थियो । एकजना पुराना कांग्रेस कार्यकर्ताको भनाइअनुसार किशुनजीलाई कुनै न कुनै केटी चाहिन्थ्याे, त्यसैले थुप्रै केटीहरू उनको जीवनमा आए । यतिसम्म कि पुष्पलाल भूमिगत रहेको बेला किशुनजी साहना प्रधानको कोठामा जान्थे रे, भलै उनी राजनीतिक भेटघाटलाई जान्थे या अर्कै उद्देश्यले ।
किशुनजीको महिलाहरूप्रतिको आशक्ति धेरै थियो भनिन्छ । पछिल्ला वर्ष अमिता कपाली किशुनजीको सहयोगीको रूपमा बसिन् । कतिपय कांग्रेसी नेतालाई मन परेको रहेनछ र भनेछन्, ‘किशुनजी, कपालीका कारण तपाईंलाई भेट्न पनि समस्या भयो । तपाईंको बदनाम गरिराखेका छन्, यिनलाई हटाउनुपर्‍यो ।’ अनि किशुनजीले ती नेतालाई जवाफ फर्काएछन्, ‘ल ठीकै छ त्यसो भए भोलिदेखि तिम्रो श्रीमती यहाँ पठाइदेऊ न त !’
कांग्रेसको अर्का नेता बलबहादुर केसी ‘पर्खाल मन्त्री’को नामले चिनिए । उनी मन्त्री भएकै अवस्थामा पर्खाल नाघेर परस्त्री गमनमा गए भन्ने समाचारले निकै चर्चा पाएको थियो । अन्य थुप्रै नेताका कहानीहरू सुन्न पाइन्छ तर कांग्रेस वृत्तमा भने यौनको विषयलाई अलि उदार किसिमले लिने गरिन्छ ।
यौन प्रकरणकै कारण चर्चित व्यक्तिहरूको राजनीतिक जीवन, पद प्रतिष्ठामा धक्का लागेका थुपै्र उदाहरणहरू छन् । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिन्टन र उनकै कार्यालयकी कर्मचारी मोनिका लेवन्स्कीबीचको यौन प्रकरणले निकै चर्चा पाएको थियो । यो प्रकरणकै कारण राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कुरा उठ्यो । खासगरी विल क्लिन्टनले सिनेटलाई ढाँटेको कुराले प्राथमिकता पायो यौन प्रकरणले भन्दा पनि । आफूले झुटो बोलेको र हिलारीप्रति अपमान हुन गएकोमा दुःखी भएको भन्दै उनले क्षमा मागेपछि यो विषय तत्कालका लागि सेलाएको थियो ।
त्यस्तै, सन् २०११ मा आईएमएफ चिफ डोमिनिक स्ट्राअसकन न्यूयोर्कको एउटा होटलमा कोरिडोरमा सफा गर्ने कर्मचारी महिलालाई बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा समातिएका थिए । उनी फ्रान्समा आउँदै गरेको निर्वाचनका बलिया उम्मेदवार मानिन्थे र सम्भावित राष्ट्रपतिमा उनको निकै चर्चा थियो । केही वर्षपछि यो मुद्दा लेनदेन गरेर सेटल गरियो भन्ने समाचार आयो तर सम्भावित राष्ट्रपतिको बलियो उम्मेदवार एउटी महिलाको आरोपका कारण क्षणभरमै विवादमा तानिएर पक्राउ परेका थिए । गत अप्रिलमा भारतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गगीमाथि पनि यौन दुराचार गरेको आरोप अदालतमा काम गर्ने एक जना महिला कर्मचारीले लगाइन् ।
यो समाचारले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोन केनेडी, फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति फ्रान्कोसिस मिटरान्ड पनि यौन प्रकरणका विवादितहरू हुन् । थुप्रै राजनीतिकर्मीहरू विवादास्पद यौन प्रकरणमा मुछिएका छन् तर ती घटनाहरूभित्रका कहानी र स्वार्थहरू के कस्ता थिए र कति सुनियोजित थिए भन्ने कुरा चिरफार गर्न जटिल हुन्छ । अधिकांश भीआईपीहरूको यौन प्रकरण बाहिर आउनुमा ठूलै राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य स्वार्थको दाउपेच हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ महरा प्रकरणले सिकाएको पाठ भनेको विशिष्ट व्यक्तिहरूको आचरण राम्रो हुनु जरूरी छ, ताकि कमजोरीमा खेल्नेहरूले ठाउँ नपाओस् । कमजोरी पत्ता लगाएर पर्दाभित्रबाट फसाउन गरिने योजना र सम्भावित जोखिमहरूप्रति सजग हुन जरुरी छ ।
सामान्यतया ६०–७० वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूमा ‘प्रोस्टेड ग्रन्थी’ बढी सक्रिय हुँदा कतिपयलाई यौन उत्तेजना/रूचि बढ्न जान्छ भन्ने कुरा मेडिकल साइन्सका जानकारहरूले पनि बताउँछन् । यी उमेर समूहका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य जाँच तथा यौन कुण्ठा व्यवस्थापनका उपायहरूको पनि खोजी गर्न आवश्यक देखिन्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको हकमा पद प्रतिष्ठा सिध्याउनलाई गरिने सबैभन्दा खतरनाक ‘अस्त्र’ यौनलाई प्रयोग गर्ने गराउनेहरूप्रति पनि उत्तिकै कडा कानुन आवश्यक देखिन्छ, यदि आरोप पुष्टि नभएको खण्डमा ।
यतिबेला नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारप्रति जुन असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, ती सबै सँगालिँदै गएर एउटा बहानामा कुनै बिन्दुमा विस्फोट हुने खतरा छ । निर्मला प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइड बडी, बालुवाटार ललिता निवास प्रकरण, गुठी विधेयक, रवि लामिछाने प्रकरण, ज्ञानेन्द्र शाहीमाथिको आक्रमण र महरा प्रकरण यी सबै घटनाक्रमबाट पैदा भएको आक्रोश अर्को कुनै बहाना देखियो भने विस्फोट हुने पक्का छ । जसरी २०३६ सालमा पाकिस्तानी नेता जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसी सजायको विरोधस्वरूप शुरू भएको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले नेपालमा ‘जनमत संग्रह’ गराउन बाध्य गरायो । यसकारण कुनै पनि बहानामा जनअसन्तुष्टि विस्फोट भयो भने संघीय प्रणाली र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
नेकपाले यदि मुलुकको र आफ्नो पनि भविष्य जोगाउने हो भने यथाशीघ्र महरा प्रकरण छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । साथै, ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि तत्काल राजीनामा गर्न लगाएर उक्त जग्गा प्रकरण छानबिन अगाडि बढाउने आँट गर्नुपर्छ । मेडिकल माफियाले घुर्की देखाएर चाबी बुझाएको अवस्था छ, तत्काल कठोर निर्णय लिने र मेडिकल शिक्षा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी ढंगले योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने आँट गर्नुपर्‍यो । बन्दै गरेका मेलम्चीजस्ता आयोजनाका काममा विशेष चासो राखेर सम्पन्न गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्‍यो । अनि जनताका दैनिकीसित जोडिएका विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक लागिपर्ने र सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बाहिर ल्याउने र कारबाही गर्न शुरू गर्ने हो भने प्रतिगामीको चलखेल बढ्यो भनेर रोइलो काड्न पनि पर्दैन । हामीजस्ता भुइँमान्छे (जनता) को अपेक्षा भनेको कम्तिमा गरिखान पाउने वातावरण त देऊ भन्ने हो । नत्र भने तिमीहरूको गणतन्त्र रहोस् नरहोस्, जनतालाई खासै मतलव नहुँदो रहेछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ४, २०७६, १४:५७:००
संसार बदल्न सक्ने तीन प्रविधि